अहिले तपाईंको जुन नाम छ, त्यो नाम नभएर अर्कै नाम भइदिएको भए, तपाईंको नामकाे वैज्ञानिक अर्थ छ ?
November 16, 2019 9:24 pm
तपाईंको नाम के हो ? जवाफमा आफुलाई चिनाउने संज्ञावाचक कुनै वाक्य भन्नुहुनेछ । तपाईंलाई नाम सोध्दा जुन वाक्य भन्नुहुनेछ, त्यो फगत तपाईंलाई चिनाउने संज्ञा हुन् । संकेत हुन् । तर, अनुभूत गर्नुभएको होला, जब कसैले तपाईंको नाम उच्चाहरण गर्छन्, तपाईंको कान ठाडो हुन्छ । तपाईंलाई त्यो नाम औधी पि्रय लाग्छ, जसले तपाईंलाई चिनाउँछ । अझ घतलाग्दो त के भने, त्यही नामका खातिर हामी संघर्ष गर्छौं ।
ठूलाबडाले भन्ने गर्छन्, ‘नाम राख्नुपर्छ ।’ अर्थात ख्याती आर्जन गर्नुपर्छ । प्रख्यात हुनुपर्छ । आफ्नो नाम सबैलाई चिनाउनुपर्छ । बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ, ‘आखिर नाममा के छ त्यस्तो ?’ एकपटक आँखा चिम्लेर घोत्लनुहोस् त, अहिले तपाईंको जुन नाम छ, त्यो नाम नभएर अर्कै नाम भइदिएको भए के होला ? असहज लाग्छ । कता के नमिले जस्तो लाग्छ । अर्को नाममा तपाईं आफुलाई सहज अनुभूत गर्नुहुन्न । यस्तो किन हुन्छ ? किनभने हामीले जुन नाम लियौं, त्यसले केही अर्थ राख्छ । हामीले जीवनमा एउटै नाम पाउँछौं । त्यो एक अद्भूत संयोग हो । त्यही नाम लिएर हामी जीवनभर बाँच्छौं । जीवनपर्यान्त पनि त्यही नाम रहिरहोस् भन्नका खातिर केही कर्म गर्छौं ।
कुनैपनि व्यक्तिको नाम केवल उनलाई चिनाउनका लागि हो । तर गंभिरतापूर्वक सोच्नुहोस् त, यस्तो लाग्छ मानौं त्यो नाम उसले गर्भबाटै लिएर आएका हुन् । किनभने कुनैपनि व्यक्तिको प्रकृति एवं प्रवृत्ति अनुसार नाम मिल्दो लाग्छ । यस्तो किन हुन्छ ? यसलाई धार्मिक विधानले मात्र होइन, वैज्ञानिक ढंगले पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । कुनैपनि व्यक्ति जन्मदा उनीहरुको कुनै नाम हुँदैन । एउटा विधी वा संस्कारबाट उनीहरुलाई नाम दिइन्छ । नामकरण गरिन्छ । हाम्रो पूर्विय दर्शनले पनि यसको विधिगत स्वरुप निर्माण गरेको छ । जब कुनै बच्चा जन्मन्छ, तब उनको नाम विधिपूर्वक गरिन्छ ।
हिन्दु पद्धतीले नामकरण संस्कारलाई निकै व्यवस्थित गरेको छ । बच्चा जन्मिएको अवस्थामा ग्रह-नक्षत्र, दिन-रात, घडी-पाला आदिको अवस्थितीलाई हेरेर नाम जुराइन्छ । यसलाई न्वरान संस्कार भनिन्छ । हिन्दु पद्धतीको १६ संस्कारमध्ये एक हो, न्वरान । यो संस्कार शिशु जन्मिएको १० देखि १२ दिनको मध्यमा हुन्छ । यसरी शिशुको नामकरण गर्नका लागि ज्योतिष विज्ञानमा पोख्त व्यक्ति चाहिन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुरुप नै कुनैपनि शिशुको नामकरण गरिन्छ, जसको धार्मिक मात्र होइन, वैज्ञानिक अर्थ पनि छ ।
हिन्दु पद्धती अनुसार शिशुको जन्म जुन नक्षत्रमा हुन्छ, त्यही अनुसार उनीहरुको नाम राखिन्छ । यसरी नामकरण गरिरहँदा परिवारका सबै सदस्य उपस्थित हुन्छन् । यस क्रममा पूजाआजा गरी पण्डितले बच्चाको नाम जुराइदिन्छन् । कुनै शिशुलाई नाम दिने संस्कार सुत्केरी आमाले सूतक सकाएपछिको अवस्थामा गरिन्छ । यसलाई सुत्केरीपछिको शुद्धिकरण पनि भन्न सकिन्छ । शुद्धिकरण संस्कार सम्पन्न गरेपछि नामकरण गरिन्छ । धार्मिक मान्यता के छ भने, नामकरण संस्कारबाट आयु वा बुद्धिको वृद्धि हुन्छ ।
बैज्ञानिक कारण ? नामकरण संस्कारको पछाडि वैज्ञानिक अर्थ पनि छ । वैज्ञानिक हिसाबले के भनिन्छ भने, त्यस दिने शिशुलाई जुन नामले पुकारिन्छ, त्यसमा उनको गुणको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिमा उनको नामको गुण पनि देखिने गरिन्छ । त्यस दिन जुन नामले शिशुलाई पुकारिन्छ, उसले जीवनभर त्यही नाम बोकेर हिँड्छ । त्यही नामको खातिर संघर्ष गर्छ ।
जब एक बच्चाको जन्म हुन्छ, त्यस दिन र समयको हिसाबले सौर्यमन्डलको ज्यामितिय स्थिती (नक्षत्रको चाल)को आंकलन गरिन्छ । त्यही आधारमा एक यस्तो खास ध्वनि (नाम) तय गरिन्छ, जो नवजात शिशुको लागि उपयोगी होस् । ताकि जब बच्चालाई त्यस नामबाट पुकारिन्छ तब आसपासको वातावरणमा यसको आवृत्तिको ध्वानी पैदा होस् ।
नाम संस्कृत भाषाको अलग अलग वर्णमा ५४ वर्ण हुन्छ । यस वर्णलाई अरु छोटो ध्वनीमा टुक्राउन सकिन्छ । यही छोटो ध्वनीको माध्यामबाट मान्छेको नामकरण गरिन्छ । सही नामकरणको माध्यमबाट सही उच्चारण गरेर तपाईं वातावरणमा नयाँ ध्वनी पैदा गर्न सक्नुहुन्छ, जो शिशुको जीवन बदल्नका लागि सहयोगी हुन्छ । त्यही कारण कुनैपनि शिशुको नामकरण अर्थपूर्ण रहने गर्छ ।